SLT SPORTS: Kooxaha Illaa Hadda Ugu Wanaagsan Horyaalka Ingiriiska, Goolasha Ay Dhaliyeen, Fursadaha Ay Abuureen Iyo Qodobo Kale. SAWIRRO | Somaliland Today
← Maraykanka: Baadhitaanka Shilkii Tareen Ee Gobolka New Jersey Iyo Khasaaraha Ka Dhashay + DAAWO
“Waa Runtii Jamaal Cali Xuseene, Muusi Biixi Waa Fulay Kuwa Ku Xeerana Qof Dhaama Kuma Jiro” Muj: Cali Guray →
SLT SPORTS: Kooxaha Illaa Hadda Ugu Wanaagsan Horyaalka Ingiriiska, Goolasha Ay Dhaliyeen, Fursadaha Ay Abuureen Iyo Qodobo Kale. SAWIRRO
(SLT-England)-Waxaa laysku diyaarinayaan kulamada todobaad ee Premier Leaque-ga iyada koox kastaaba ay doonayso in natiijo fiican ka soo hoyso kulamadan, laakiin ilaa hadda lixdii kulan ee la soo ciyaaray waa kooxdee kooxda ugu fiican ee qaab ciyaareedka ugu fiican soo badhigtay?.
Sky Sports oo qaybta ugu wayn ku leh xuquuqda baahinta kulamada Premier Leaque-ga ayaa sameeyay qiimaynta kooxaha ilaa hadda ugu fiican Premier Leaque-ga iyada oo lagu qiimaynayo goolashii ay dhaliyeen, fursadihii ay abuureen iyo xog badan oo ku salaysan waxqabadkii kooxaha Premier Leaque-ga.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa kooxaha ugu qaab ciyaareedka fiican ee xogtan ka soo baxay isla markaana sida wayn loogu raaxaystay bandhigooda. Waxaanu halkan idinkula wadaagi doonaa xog muujinaysa kala duwanaanshaha kooxaha iyo sida qaar ka mid ahi ay haddaba u yihiin kuwo ku jira xaalado fiican. Haddaba halkan kaga bogo xogta iyada oo gabagabada qormadeena aan ku sheegi doono kooxda ilaa hadda ugu qaab ciyaareedka fiican.
Kooxaha Goolasha Ugu Badan Ka Dhaliyay Premier Leaque-ga:
Manchester City ayaa ilaa hadda ah kooxda goolasha ugu badan ka dhalisay Premier Leaque-ga xili cyaareedkan iyada oo 18 gool ku soo dhalisay lixdii kulan ee ay soo ciyaartay. Man City ayaa cel celis ahaan 3 gool ka soo dhalisay kulamadii ay soo ciyaartay halka 2 gool oo ka mid ah 18 ka gool ay ka dhalisay meel ka baxsan xerada ganaaxa.
Waxaa gool dhalinta Premier Leaque-ga kaalinta labaad kaga jirta Liverpool oo ilaa hadda dhalisay 16 gool iyada oo celcelis ahaan kulankiiba ka dhalisay 2.7 gool. Reds ayaa ah kooxda goolasha ugu badan ka dhalisay meel ka baxsan xerada ganaaxa waxayna 3 gool ku dhailsay darbooyin laga tuuray goob ka baxsan xerada ganaaxa.
Arsenal ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo ilaa hadda dhalisay 15 gool waxayna Gunners celcelis ahaan ay kulankiiba ku dhalisay 2.5 gool iyada oo hal gool oo kaliya ka dhalisay meel ka baxsan xerada ganaaxa.Manchester United, Chelsea iyo Tottenham ayaa kaalmaha ku sii xiga buuxiyay waxayna soo kala dhaliyeen 12,10,10 gool sida ay u kala horeyaan.
Xogta Aan Soo sharaxnay Oo Dhamaystiran Halkan Kaga Bogo:
Kooxaha Premier League-ga Ee Fursadaha Ugu Badan Abuuray:
Liverpool ayaa hogaaminaysa kooxaha Premier Leaque-ga ee abuuray fursadaha ugu badan iyada Reds abuurtay 97 fursadood halka ay birta goolka ka garaacday laba jeer. Kooxda Tottenham ayaa kaalinta labaad ku jirta waxayna abuurtay 83 fursadood iyada oo 3 jeer birta garaacday. Manchester City ayaa kaalinta saddexaad ku jirta waxayna abuurtay 80 fursadood halka 4 jeer ay birta garaacday.
Waxaana liiska kooxaha fursadaha ugu badan ilaa hadda abuuray dhamaystiray Southampton (77), Everton (76) iyo Chelsea oo iyaduna abuurtay 76 fursadood. Kooxaha Arsenal iyo Manchester United ayaa gabi ahaanba ka maqan lixda kooxood ee ilaa hadda fursadaha ugu badan abuuray.
Kooxaha Premier League Ka Sameeyay Darbooyinka Ugu Badan:
Markale kooxda Liverpool ayaa hogaaminaysa kooxda darbooyinka ugu badan ka samaysay premier Leaque-ga waxayna sidoo kale Reds hogaaminaysa kooxaha darbooyinkooda ku sameeyay bartilmaameedka goolka ee ugu badan. Reds ayaa 117 darbo ku tuurtay goolka kooxihii ay la soo ciyaartay lixdii kulan ee premier Leaque-ga iyada oo 43 darbo la beegsatay goolka.
Kooxda Everton ayaa kaalinta labaad ugu jirta dhinaca darbooyinka goolka lala beegsaday waxayna Everton 90 darbo oo ay tuuray 39 ka mid ah ay ku beegsatay goolka. Manchester City ayaa samaysay 36 bartilmaameed iyada oo guud ahaan tuurtay 106 darbooyin.
Southampton ayaa 34 bartilmaameed ku samaysay 101 darbo oo ay ka samaysay lixdii kulan halka Chelsea ay ay 33 bartilmaameed ka samaysay 100 darbo oo ay tuurtay, waxaana lixda kooxood ee ugu sareeya dhamaystirtay Manchester United oo 97 darbo oo ay samaysay 33 ka mid ah bartilmaameedkooda la heshay. Arsenal ayaa markale liiskan ka maqan.
Xogta Oo Dhamaystiran Halkan kaga Bogo:
Kooxaha Premier Leaque-ga Ka Sameeyay Karoosyada Ugu Badan Oo Ay Koornayaashu Ku Jiraan:
Marka ay timaado kubbada sare ee karoosyada ama koorayaasha waxaa kooxaha Premier Leaque-ga hogaaminaysa kooxda Crystal Palace oo samaysay 167 darbooyin oo karoosyo iyo koornayaal iskugu jira waxaana ku soo xiga kooxaha Swansea City 144, Southampton 141, Man United 141, Chelsea 140 iyo Stoke City 128.
Tirada Karoosyada Ama Koorayaasha
Marka xogta la eego gaar ahaan fursad abuurista, gool dhalinta darbooyinka la sameeyay ama goolka lagu bartilmaameedsaday waxaa ilaa hadda kooxaha ugu qaab ciyaareedka fiican ah Liverpool iyada oo darbooyinka karoosyada iyo koornayaashu ay wax badan ka tilmaamayaan qaab ciyaareedka kooxda Klopp ee aan ku tiirsanayn kubbadaha sare.